09/05/2011 : POTIKA TANTERAKA NY FIRENENA SY NY TARANAKA MALAGASY RAHA IZAO NO MITOHY !!!
HAT mandripaka bois de rose sy volamena, vatosoa, ary Pétrole sns… miaraka amin’ny KARANA sy FRANTSAY. Manjaka ny fivarotana tany amin’ny SINOA anamboarana Terrain sy Auditorium eny Antsonjombe, ary andehanana Vacances any QATAR. ...
... Ny HAT sy ny MIARAMILA lasa vondron’olona manakarena tampoka voky harem-pirenena. Ny tany sy Harena an-kibon’ny tany amidy amin’ny Frantsay. ...
Invitation.pdf 32.31 Ko
05/05/2011 : Ambohitsaina : fitahin’ny FATE ny mpianatra
Andro maromaro izao no nitokona ny mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo mitakynny famoahana ny daty hanombohan’ny fampianarana. Androany ary dia nahazo fihaonana tamin’ireo tomponandraikitra ao amin’ny Oniversiten’Antananarivo izy ireo. Nandritra izany no namelabelaran’ireo solotenan’ny mpianatra mikasika ny anton’ny fitokonana sy hetsika maro ataon’izy ireo eny Ankatso. Tapaka taorian’izay fa hangataka fihaonana amin’I TGV sy I Vital hono ny filohan’ny oniversiten’Antananarivo hikarohana vahaolana mikasika izao fikatsoana izao. Ny mpianatra kosa dia nanapa-kevitra ny hanohy hatrany ny fitokonana mandra-pahitana izay tena lalan-kizoran’izany soso-kevitra avy amin’ny mpitantana izany.
Vao naheno izany ny FATE dia nampiatso fihaonana avy hatrany ka teny amin’ny tranon’ny ministeran’ny vola sy ny teti-bola no nanatanterahana izany. Araky ny vaovao azo dia nanatrika ity fihaonana ity ny minisitry ny fampianarana ambony an’ny FATE, ny minisitry ny vola sy ny teti-bola an ‘ny FATE ary ireo tomponandraikitra amin’ny oniversite enina eto Madagasikara sy ireo solotenan’ny mpianatra.
Nanome toky, HONO, ireo mpikambana amin’ny governemanta Vital ireo fa hivoaka alohan’ny 16 May hoavy izao ny datin’ny fidirana eny amin’ny anjerimanontolo. Raha tsiahivina anefa ny fitakian’ny mpianatra dia ilay daty hidirana hianatra mihitsy no tokony alohan’ny 16 May fa tsy ny fahafantarana azy akory. Mbola nampanantena ihany koa ireo minisitry ny FATE fa hojerena manokana ny mikasika ilay fiakarana 10.000 Ar an’ny saram-pisoratana anarana ka mety hisy ny famerenana hoan’ireo izay efa nahefa azy io.
Setrin’izany rehetra izany dia nitaky ny hampitsaharana ny fitokonan’ny mpianatra izy ireo ary nibaiko ny hisokafan’ny fisoratana anarana manomboka rahampitso
Ny toky fitaka …
Raha izao fizotry ny toe-draharaha eny amin’ny anjerimanontolo izao dia azo inoana fa ny “hamono afo” no tena nahamaika ny FATE. Nataon’izy ireo fotsiny izay hampitsaharana ireo hetsika ataon’ny mpianatra ireo dia hialangalana amin’izay izy avy eo. Marik’izany ny fanekena toa maivana loatra mikasika ny hijerena ny momba ilay fisondrotan’ny saram-pisoratana anarana. Na izany aza tsy nahatana ny teny nifanomezana ireo solontenan’ny mpianatra satria tamin’ny voalohany dia hoe tokony hiditra mialohan’ny 16 May saingy rehefa vita ilay fivoriana teo Antaninarenina dia ilay daty no hofantatra mialoha an’ny 16 May. Inoana fa fahendrena izany fa tsy sanatria fandeferana manoloana ny mpanongam-panjakana manao izay mahafaly azy eto Madagasikara. Ankoatr’izay dia mbola tsy fantatra ny momban’ny olana eo anivon’ny SECES satria tsy nasiana resaka tao amin’ny fivorianan ny momba azy ireo nefa tsy misy fampianarana raha tsy ny mpampianatra hitarika. Mety mirona amin’ny fampiadina ny mpianatra amin’ny mpampianatra mpikaroka izao fanapahan-kevitra izao satria hampangain’ny FATE ho ireto farany no tsy mazoto hampianatra nefa tsy mbola nilamina ny momba ny fitakiany.
04/05/2011 : Ambohitsaina : mitaky hiditra alohan’ny 16 May ny mpianatra (+vidéos)
Raisin’ireo mpianatra an-tanana manomboka izao ny hoaviny rehefa mandrirarira loatra ireo milaza fa tompon’andraikitra eny amin’ny anjerimanontolo. Androany maraina dia nifampontoana teny Ankatso ireo mpianatra rehetra ankoatry ny ny avy amin’ny sampam-pampianarana DEGS. Nanatevin-daharana azy ireo ny avy eny amin’ny “Ecole Supérieure Polytechnique » Vontovorona.
Mitsipaka marindrano ny fitohizan’ny fisoratana anrana ireto mpianatra ireto. Amin’izy ireo manko dia tsy rariny raha isintomana vola lalandava ireo Raiamandreny nefa ny andro hidiran’ny zanany hianatra aza tsy fantatra akory. Nanombohan’izy ireo ny hetsika androany ary ny fanakatonana ny toerana fisoratana anarana mba hiala amin’izay fanararaotana ataon’ny ministeran’ny fampianarana ambony an’ny FATE izay.
Taorian’izay dia nangataka ny hihaona tamin’ny filohan’ny Oniversiten’Antananarivo ireto mpianatra ireto. Rehefa tonga nanao «sit in » manoloana ny trano fiasan’izany tomponandraikitra izany anefa izy ireo dia nolazaina fa tsy misy afaka mandray azy satria lasa nanao fiofanana avokoa ireo olon-dehibe mahatapa-kahitra. Ankoatry ny fitakiana ny daty hidirana dia anton-dian’izy ireo teo amin’ny « présidence » ny fitakiana taratasy manamarina fa hatsahatra marina ny fisoratana anarana androany.
Manohy mitaky ny fivoahan’ny daty idirana hianatra izy ireo saingy miha-hentitra kokoa ny fangatahana. Takian’izy ireo arak’izany ny hidirany hianatra alohan’ny 16 May 2011 raha tsy izany dia efa azo antoka fa taona fotsy ity taom-pianarana ity.
Manoloana ny tsy fazahoana fihaonana izay noraisin’ny mpianatra ho toy ny tsy firaharahana azy ireo dia nanapa-kevitra izy ireo fa hidina any amin’ny fiantsonan’ny zotra 119 ka hiandry ny fahatongavan’ny ministra mpiahy azy ireo. Fomba nanetin’izy ireo hanehoana ihany koa izany fa rehefa handray an-tanana ny hoavy dia mila mijoro sy sahy hatramin’ny farany.
Efa niantrana teo amin’izany toerana izany anefa ny EMMOREG izay mbola mijoro hatrany ho hery famoretana hoan’izay mitaky ny rariny eto Madagasikara. Fiara vaventy enina ; 4X4 telo ary fiara Renault Kangoo iray no nitondra ireo « be boty » mirongo fiadiana manoloana ireo mpianatra an-tanam-polo. Tsy nampihemotra ireto farany anefa izany fa vitan’izy ireo ny naneho hevitra na dia efa folo metatra aza sisa ny elanelana teo amin’ny roatonta.
Ora iray taty aoriana dia nanapa-kevitra ireo mpianatra fa hatsahatra aloha ny hetsika hoan’ny androany. Hitana ny teny nomeny kosa anefa izy ireo, araky ny vaovao azo farany, saingy hijery ny fomba hanovana ny paikady mba hahatongavan’ny minisitra eny Ankatso ahafantarana marina izay tena mba eritreretiny mikasika ireto zana-bahoaka ireto. Raha ny voalazan’ireo mpianatra kosa dia efa mandeha amin’izao fotoana ny fampihorohoroana ataon’ny filohan’ny Oniversiten’Antananarivo amin’ireo mpitari-tolona ankoatry ny fanambazana vola mpianatra sasantsany hatao “avocat du diable” eny amin’ny hainoamanjerim-panjakana isan-karazany.
01 May 2011 : Very asa sy tsy an’asa : fiverenan’ny ara-dalàna no vahaolana (+vidéos)
Maherin’ny dimy alina ny Malagasy very asa noho ny krizy naterak’izao fanonganam-panjakana izao. Hatreto aloha dia tsy mbola misy ny vahaolana fa mitombo isan-taona ny orinasa mikatona. Isan’ny niteraka fahaverezan’asa betsaka indrindra ny fandorana ireo orinasa maro namelona fianakaviana aman’arivony niampy ny fahafoanan’ny lalam-barotra AGOA izay niteraka fananganana orinasa an-jatony tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha RAVALOMANANA Marc.
Sary tranom-pokonolona Analakely
Mazava hoazy fa rehefa mitombo ny tsy an’asa dia mahazo vahana ny fahantrana. Porofon’izany ny fiiban’ny harikarena faobe izay niainga tamin’ny 7,8% tamin’ny 2008 ary zara raha mahita 2,8 tamin’ny taona 2010 teo.
Mifoha amin’ny torimasony ankehitriny ireo olom-pirenena mizaka izany tsy fananan’asa izany. Atrikasa nentina nifampizarana fomba fijery sy nanombohana ny fifandraisana no nanamarihan’izy ireo ny andron’ny 01 May. Maro ny fanontaniana sy ny vahaolana nentin’ireto very asa ireto. Isan’izany ny mikasika ny zo sindikaly amin’ny fanehoan-kevitra sy ny tokony hisian’ny ivotoerana iray ahafahan’ny mpiasa rehetra mivondrona ka mampahafantatra ny zo sy ny adidiny amin’ny maha-mpiasa azy ireo sy ny sisa sy ny sisa. Niombonan’ny rehetra tao anatin’ny fifanakalozan-kevitra fa ny vahaolana lehibe amin’ny tsy fananan’asa vokatry ny krizy dia ny fiverenan’ny firenena eo amin’ny ara-dalàna.
Namafisin’i Olivier Rakotovazaha izany rehefa nandray fitenenana tao amin’ity fihaonana ity ny tenany. Nambarany fa misolotena ny mpanao politika manohitra ny FATE ny tenany namaly ny fanasana nataon’ireto mpiray tanindrazana iharan’ny voka-dratsin’ny fanonganam-panjakana. « Tsotra ihany ny vahaolana amin’ny zavatra rehetra noresahinareo teo » hoy izy « ny fazahoana ny fankatoavana iraisam-pirenena izay mitaky ny fiverenana amin’ny ara-dalàna ». Nitondra fanazavana manokana mikasika ny AGOA moa ny tenany ka nambarany fa efa nanameloka ny tsy fanajana ny zon’olombelona eto Madagasikara ny Amerikana ka raha tsy miova izany tsy hiverina amin’ny laoniny ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roatonta. « Izao anefa isika manatanteraka fanehoan-kevitra ato anaty rindrina efatra amin’ny andro fetin’ny asa mbola feno miaramila manodidina » hoy ity mpanao politika ity. Izany hoe tsy hankato izao fahefana izao mandrakizay ny amerikana.
01 MAY 2011 : NY MPIASA NO "FETA"
2009 – 2010 - 2011: 1er may fanintelony eo ambany fitondrana norombahana tamin-keri-miaramila izao. 2009 dia fandorana sy fandrobana orinasa, làlam-barotra goavana AGOA very, famatsiam-bola ny tetikasam-panjakana tankina. Asa very, ankohonana fadiranovana, karaman'ny mpampianatra tsy voaloa. Mirongatra tampoka ny vidim-piainana. Mpiasa sy orinasa ary fihariana natao sorona no dikan'ny 2009. Ranomasom-boay hatreto ny an'ny mpitondra nilaza ny hanonitra ny nataony.
1meyNyMpiasaNoFeta.pdf 74.18 Ko
29/04/2011 : Ambohitsaina : gejaina ireo mpianatra mitaky ny fidirany (+vidéos)
Fianarana fa tsy fitsidihana ….
Nitohy ary nihamafy ny tolona nataon’ireo mpianatra eo amin’ny sampam-pianarana fitsaboana. Mitaky ny hanomezana daty marina hanombohan’ny fampianarana eny amin’ny anjerimanontolo izy ireo. Manakaleo ireto mpianatara ireto ny kobaka am-bava lavareny ataon’ny FATE mikasika ny hoavin’izy ireo. Araky ny fanazavana azon’izy ireo tany amin’ny sojabeny mantsy dia efa tara herinandro ny fotoam-pamerenana raha toa ka niditra tamin’ny 11 Aprily teo izy ireo. Izany hoe mikorontana tanteraka ny tetiandrom-pampianarana noho ny mpanongam-panjakana manentsi-tadiny.
Kianin’ireto mpianatra ireto ny fitsidihana nataon’i TGV ilay trano vaovao hanaovana « cité U » satria tsy misy ilana izany raha tsy mianatra izy ireo. Nambaran’ny mpitondra teny eo amin’ny mpianatra ao amin’ny « faculté de Médecine » fa datin’ny fanombohan’ny fampianarana no notakiana hatramin’ny Alarobia lasa teo fa tsy fitsidihan’i TGV eny Ankatso akory.
Ny mpampianatra mpikaroka koa mbola tsy afa-po
Manahy amin’ny tsy firaharahana azy ireo ihany koa ireo mpampianatra mpikaroka ankehitriny. Vokany dia hamerina ny hetsika fanairana indray izy ireo. Nanomboka androany ny « sit in » natao teo amin’ny tany malalaka eny Ambohitsaina. Hampahatsiaro ny anjara tsy efan’ny FATE izy ireo tamin’ilay fifanarahana natao tamin’ny 11 Janoary 2011. Araky ny nambaran’ny Filohan’ny SECES sampana Antananarivo dia efa nandefitra mafy izy ireo mba hisian’ny marimaritra iraisana saingy ilay kely sisa andrasana amin’ny FATE dia tsy efany hatreto.
Nisy ny fanantonan’ireo solotenan’ny mpianatra an’ireto mpampianatra ireto ka tapaka fa hisy fivoriana handinihana izay mety azo iaraha-miasa hanambarana ny hery. Ny tsy hiverenan’ny olana eny amin’ny anjerimanontolo no tanjona amin’izany. Mialoha izany dia nazavain’ny mpampianatra mpikaroka manoloana ireo mpianatra tonga teny an-toerana ny fitohizan’ny fitakian’izy ireo.
Nampihorohoroana ireo mpianatra
Taorian’ny fifampizarana teo amin’ny « esplanade » dia nizotra nihazo ny lalana mihazo ny fiantsoanan’ny fitateram-bahoaka ny mpianatra. Nanapa-kevitra ny hanao oniversite maty ora vitsy izy ireo ka izay manana karatra manambara marina ny adraikiny ao amin’ny anjerimanontolo ihany no avela hihazo izany toerana izany. Araky ny fanazavana nomen’ireo mpampianatra tokoa dia tokony « accès réglementé » ny eny amin’ny oniversite fa tsy idiran’ny rehetra akory. Tamin’ity indray mitoraka ity kosa dia fomba iray netin’ireo mpianatra naneho ny fitakiany amin’ny mpiara-monina izany sady fampahalalana azy ireo ny zava-misy marina eny Ankatso.
Minitra vitsy nipetrahan’ireo mpianatra teo amin’ny fiakarana mankany Ambohitsaina anefa dia nanao be fiavy ny EMMOREG. Fiara vaventy efatra ; 4X4 telo ary Renault Kangoo iray no nirodorodo niakatra avy any Tsiadana. Tsy niala anefa ireo mpianatra na izany aza saingy rehefa nampihorohoroan’ireo hery famoretana ireo dia niakatra milamina nihazo ny « barièrre » fidirana ao amin’ny oniversite.
Nahatohina ireto tanora ireto ity trangan-javatra ity satria « mitaky hianatra izahay » hoy ny solotenan’izy ireo « ary tsy manimba zavatra ka nahoana no andefasana mpampihorohoro toy izao ? ».
Maty ny afo …
Rehefa nifampiresaka tamina mpampianatra iray ireto mpianatra ireto dia nanapa-kevitra fa hiandry ny valiteny amin’ny fazahoana manidy ny vavahady satria izay no fomba tsy misy atahorana indrindra. Nivadika teo amin’ny vavahady fidirana izany ny sakana natao tany ambany. Nandritry ny fotoana niandrasana ny fanalahidy anefa dia nampiantso maika ilay sojaben’ny « médecine » ary namaly izany avy hatrany ny solotenan’ny mpianatra. Telopolo minitra aty aoriana, rehefa nivoka ireo mpitari-tolona, dia ajanona hono ny fitokonana ary tsy mahazo miresaka amin’ny mpanao gazety intsony ireo izy ireo.
Miandry ny tohin’izao toe-javatra izao ny mpanara-baovao satria fantatra izany fa mety nahazo fampitahorana ireto mpitari-tolona ireto ary izay no nampiova ny fihetsiny taorian’ny fifampiresahan’ny roatonta.
23/04/2011 : Nahatsiaro ireo gadra politika ny Filoha RAVALOMANANA (+vidéos)
Amin’izao fetin’ny Paka izao dia tsy nanadino ireo iharan’ny tsindry hazolena ny Filoham-pirenena RAVALOMANANA Marc. Nandefa fanampiana hoan’ny fianakavian’ireo voafonja noho ny hevitra tsy mitovy ny tenany. Natao indrindra mba hitsinjovana ny voaofonja sy ny fianakaviany ao anatin’ny hasarotan’ny fiainana. Tsy vitan’izany fa mbola nomeny fanampiana ihany koa ireo izay nitondra takaitra noho izao krizy nanomboka tamin’ny taona 2009 izao.
Misy ny rafitra miahy azy ireo ao amin’ny foiben’ny Ankolafy RAVALOMANANA ka ny solombavam-bahoaka Jules Andriamaholison voafidy tao amin’ny boriborintany voalohany no miahy izany fikambanana izany.
40.000 Ar isaky ny ny voafonja sy ny manan-takaitra no natolotra ary mbola niampy fittia tsy mba hetra nataon’ny mpiara-mitolona teo amin’ny Kianjan’ny Finoana izany hoan’ireo mitondra fery sy takaitra ireo. Araky ny antotan’isa nomen’Atoa Solo izay filohan’ny fikambanana dia mahatratra 85 ireo any am-ponja amin’izao fotoana izao ary 15 ireo mitondra takaitra ka mila fitsaboana maharitra. Tsy mijanona amin’ny vaninandro fety ny fanomezana fanampiana raha ny filazan’ny depiote Jules fa miakina indrindra amin’ny enti-manana ny ezaka. Na izany aza mitohy hatrany ny fitakiana ny fanafainganana ny fitsarana na ny famoahana malalaka ireo gadra politika ireo.
23/04/2011 : Raharaha HCC : roa taona tsy mbola notsaraina (+vidéo)
Mikaikaika avokoa ny finakavian’ireo voafonja noho ny tsy fitovian-kevitra politika ankehitriny . Izay tafiditra am-ponja manko dia tsy mahafantatra izay miandry. Tsy alefa tsaraina fa dia alentika ao anaty haizina fotsiny mba tsy ho afaka haneho hevitra. Ireo rehetra voarohirohy tamin’ny raharaha HCC niaraka tamin’i Ralitera Andrianandraina dia tsy mahala izay mety hoaviny. Misy amin’izy ireo manamboninahitra lefitra ary tsy salama mihitsy any am-ponja any.
Efa niharan’ny fikasihan-tanana izy ireo tamin’ny andro nisamborana azy. Misy amin’izy ireo no tsy mahare intsony amin’izao fotoana izao ary misy ny tsy afa-mitsangana ara-dalàna noho ny vono nahazo azy. Araky ny fijoroana vavolombelona nataon’ity renim-pianakaviana iray dia zary manana toe-tsaina manohitra ny reniny ilay zanany vavy tokana ankehitriny noho ny alahelony ny rainy. Manginy fotsiny ny tsy fahampian’ny enti-manana intsony noho ny karama notapahin’ny FATE. Mitaky ny hanafainganana ny fitsarana azy ireo arak’izany ireto fianakaviana ireto fa tsy rariny ny mahazo ny havany. Namaranany ny teniny moa ny hoe « anareo ny fitsarana ety an-tany ka anjaranareo ny mieritreritra fa ny fitsarana any an-danitra kosa iarahantsika miandry ».
22/04/2011 : Amidin’i TGV "30 Ariary" ny tanindrazana (+vidéo)
Mitohy hatrany ny fahafaham-barakan’i Madagasikara noho ny gaboraraka ataon’ny FATE. Taorian’ny horonan-tsary manaporofo ny fanondranana « bois de rose » tsy ara-dalàna sy ny tsy fazahoana misidina ny habakabak’i Eoropa hoan’ny Air Madagascar dia vaky bantsilana indray izao ny varotra « tany mora ». Gazety lehibe any ivelany any no namoaka ity fanadihadiana ity ary manivaiva mihitsy ny lanjan’ny Firenena Malagasy. Araky ny voalaza ao amin’izany lahatsoratra izany dia amidin’ny FATE telopolo ariary (30 Ar.) ny metatra tora-droa (m²) amin’ny tany eto Madagasikara.
LAHATSORATRA : IndiaTimes
Karana no manao ity fifanakalozana ara-barotra amin’ny mpanongam-panjakana ity. Malaza tokoa izy ity satria any Inde any amin’izao fotoana dia betsaka ny mpiasam-panakana sy ny miaramila no mangataka fisotroan-dronono mialoha hanenjika izany « tany mora » aty Madagasikara izany. Iny faritra DIANA iny, araky ny vaovao no tena atao gaboraraka toy izany indrindra ireo nosy kely maro mampalaza ny distrikan’i Nosy Be. Milaza moa ireo karana mahazo izany tany izany fa « paradisa eto an-tany sy nofinofy zary hita maso » ireo tany azony amin’ny vidiny mirary ireo.
Ririnin-dasa tsy tsaroana tokoa
Hadinon’i TGV sy ny forongony angamba fa ny fivarotana tany tamin’ny DAEWOO Co. hanatanterahana tetikasa lehibe no isan’ny nanenjehan’izy ireo ny Filoha RAVALOMANANA Marc. Tetikasa hitondra tombontsoa izy io raha tanteraka teo satria ny roa ampahatelon’ny mpiasa ao amin’ilay orinasa nokasaina hatsangana dia avy eo amin’ny toerana nanorenana ny orinasa avokoa. Ny taratasy natao sonia tamin’izany dia fanomezan-dalana hanatanteraka ny fitiliana mialoha amin’ny asa izay nokasain’ny Korena hatao teo amin’ilay toerana.
Ny fivarotana ny tany eto Madagasikara dia tokony mandalo fankatoavana eny amin’ny antenimiera satria ireo no solotenan’ny vahoaka ao amin’ny fitondrana. Ankehitriny tsy misy olom-boafidy ao anatin’ny FATE fa mpanongam-panjakana no manendry izay tiany hiara-hiasa aminy. Raha fehezina dia mangalatra ny tanin’ny Malagasy i TGV sy ny ekipany ary amidin’izy ireo ariary enina ny tanindrazana hamenoany ny paosiny fa tsy hikatsahana ny mahasoa ny mpiray tanindrazana.
Fanazavana nentin'ny Depiote Mektoub :
Agriculteurs_indiens_se_tournent_vers_recolter_des_gains_riche_en_Madagascar.pdf 220.76 Ko
21/04/2011 : ALMA Ambohimahitsy : mamaky trano ny miaramila, mpanao gazety iray nampandohalihina